TRUESTORY: အပြာကားလား၊ မြန်မာကားလားဟု ထင်မှတ်မှားစေနိုင်သည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက
အပြာကားလား၊ မြန်မာကားလားဟု ထင်မှတ်မှားစေနိုင်သည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက
ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှုမရှိခြင်း၊ဦးဇင်ဝိုင်း တို့ ဦး ဆောင်ပြီး ကောင်းအောင် လုပ်နေသည်ဟု ယူဆခြင်း တုိ့ ကြောင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား များ ကောင်းလာနိုင်သည်ဟုသုံးသပ်ကြချိန်တွ
င် ခေတ်နှင့်အညီထွက် ပေါ်လာသောဇာတ်ကား များမှာ မောင်နှင့်နှမ မိသားစု အတူ မကြည့် သင့်သည့် ဇာတ်ကားများ ပါလာ သည်။
တတ်ဖူးဟု ဖြေသည့်အပြာဆန်ဆန် ဇာ တ်ကား၊ ပညာပေးဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ကာအစွမ်းကုန် ဖော် ချွတ်သည့်ဇာတ်ကားများ ဖောဖောသီသီထွ
က်လာသည်တော့ အမှန်။ ထိုအတွက် facebook အသုံးပြုသူ တစ်ဦးမှ ၉ တန်းသူ ရှိ ရင် သတိထား ဟု အမည်ပေးထားသည့် ဇာတ်ကားလေး အပေါ်မှတ်ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
“ ၉ တန်းသူရှိရင် သတိထား.. :P
အိမ်မှာ ၉ တန်းကျောင်းသူများရှိလို့ကတော့ ဒီကားမျိုးကြည့်ရင် အတုလိုက်ခိုးနေမှာစိုးလို့.. ၉ တန်း သူ လို့ ပြောတဲ့ သူကတော့ ဆင်ဆာလွတ်လတ်ခွင့်၊ ဒါရိုက်တာ၏ မောင်းမှု၊ မင်းသားများ၏ တွဲခေါ်မှု နဲ့ ဒရမ်မာ၊ Romance များကို ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်အောင် ဂျင်ဂျင် လည် သရုပ်ဆောင်နေရပါပြီ.. စကား မစပ် အဲဒီကလေးမ အိမ်မှာများ သူ့ကားတွေကို သူ့မိဘတွေနဲ့ အတူ တူ ထိုင်ကြည့်ရင် မျက်နှာများ ပူနေ မလား? သူ့မိဘတွေ စိတ်ထဲကရော ဘယ်လို သဘော ထားကြ မလည်း .. အင်း ငါ့သမီးလေး အောင်ြ မင်နေ တယ်လို့ပဲ တွေးနေမလားပဲ.
P.S .. ကြည့်ချင်သောသူများကတော့ ~~~ မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်~~ လို့ ဆိုင်မှာမေးပြီး ငှားပါ.. ကားေ ကာင်း တစ်ကားပါ.... ”
Anonymous7May 2013 08:02
အိုဘားမားက အာ၇ှယဉ်ကျေးမှုကိုလိုက်နာပီးမနမ်းပဲနေတာကို စုကြည်က ၇ှင် ကျမကိုနမ်းချင်၇င်နမ်းလေ အားမနာပါနဲ့ဆိုပီး မျက်နှာထိုးပေးပါးထိုးပေးပီး ဖါသယ်မတွေအ၇ှုံးပေး၇လောက်အောင် လူပုံအလယ်မှာ ကပ်ပလီအိုဘားမား၇င်ခွင်ထဲဝင်ပီးအဖက်ခံပြ အနမ်းခံပြတယ် လူပုံအလယ်မှာ ကပ်ပလီဘုန်းကြီးမဲတူးကိုမြင်တာနဲ့၇င်ခွင်ထဲပြေးဝင်ပီးပြေးဖက်တယ်ေ၇ှ့ဆောင်နွားမကြီး စုကြည်ကိုယ်တိုင်က ဖြောင့်ဖြောင့်မသွားပဲဖါကျင့်ဖါကြံနဲ့ဖါလမ်းခင်းပြနေတော့ အနောက်ကနွားမတွေကလဲ ဖါကျင့်ဖါကြံနဲ့ဖါလမ်းကိုနင်းကြတော့တာဘဲ့
နန်းခင်ဇေယျာက မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲကိုအကြောင်းပြပီး ဘန်ကောက် ပတ်ပုံဖါတန်းက ဖါသယ်မတွေ ဖေါက်သယ်၇ှာဖို့စင်ပေါ်မှာကုန်းပြကော့ပြ ဖင်လှုပ်ပြနို့၇မ်းပြ၇ာမှာဝတ်တဲ့ ဘီကီနီမျိုးနဲ့သွားပြိုင်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ပထမဆုံး အတွင်းခံဘ၇ာစီယာနဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ် ၇ှိုးပွဲကြီးဆိုတဲ့ မော်ဒယ်နာမည်ခံ ကြေးကြီးဖါတွေ၇ဲ့ ဖေါက်သယ်၇ှာပွဲလုပ်တယ်
စာပေစီစစ်ေ၇းမ၇ှိပဲ စောက်၇ှက်မ၇ှိတဲ့မော်ဒယ်ကောင်မ၇ဲ့ဖါဆန်ဆန်ဓါတ်ပုံတွေဖေါ်ပြထားတဲ့ မာယာမဂ္ဂဇင်းဆိုတဲ့ ဖါမဂ္ဂဇင်းကိုထုတ်တယ်
၇ုပ်၇ှင်ဆင်ဆာမ၇ှိပဲ ခြင်ထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ မင်းသားကကောင်းလားလို့မေးတာကို မင်းသမီးကမသိဘူးမပြောတတ်ဘူးလို့ဖြေတဲ့ ဖါကားမျိုးတွေ၊ ပညာပေး၇ုပ်၇ှင်နာမည်ခံအဖေါ်အချွတ်ကားမျိုးတွေ ၇ိုက်တယ်
အနမ်းခန်းကိုမ၇ိုက်နိုင်ဘူးလို့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလေးစားတဲ့သက်မွန်မြင့်က ငြင်းလိုက်တဲ့ကြားက ဒါ၇ိုက်တာ ဖါခေါင်း ဝိုင်းက အဲ့ဒီဖါကားကိုမဖြစ်မနေ၇ိုက်မယ်ဆိုတာကို ဖါသယ်မဖွေးဖွေးက၇ိုက်ပေးမယ်လို့သဘောတူလိုက်တယ်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကဖါနိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားမယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ်ဖါနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာအောင်ဝိုင်းဝန်းပီးလုပ်နေကြတယ်
တိုင်းချစ်7May 2013 16:30
သိုက်သိုက်7May 2013 17:13
ပေါ်ပေါ်တင်တင် နိုင်ငံကို စော်ကား ဒီလို သရုပ်ပျက် အဝတ်အစားနဲ့ ပလွှား အပြာဆန်ဆန် ရုပ်ရှင်ကားတွေ ရိုက်နေတာထက်စာရင် ဝမ်းရေးအတွက် ကွယ်ရာမှာ ဖာခံစားတာက မြတ်ပါသေးတယ်
သာဂိ7May 2013 17:44
ဖာသယ်မတွေက တစ်ကိုယ်လုံးနီးပါး ပေါ်တင်ချွတ်ပြပြီး ဈေးခေါ်မယ်.. ဖာဆန်ဆန်စကားပြောတွေနဲ့ ဖာကားတွေ ရိုက်ကြမယ်...
သောက်ဦးဏှောက်မရှိသူတွေက ရှေ့နောက်စဉ်းစားမှုမရှိ အော်ခြင်သလိုအော်ကြမယ်... အခွင့်အရေးသမားတွေက အချောင်နှိုက်ကြမယ်... အာဏာရသူက အခွင့်အာဏာသုံးပြီး..လုပ်စားကြမယ်...
မကောင်းမြစ်တာ၊ ကောင်းရာညွန်လတ်... မိဘရင်းဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်မနေပါနဲ့ဗျာ... လောကနီတိ၊ ဗြမစိုရ်တရား၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု၊ ၀ံသာနုရက္ခိတတရား အဲဒါမျိုးတွေကို အခြေခံပညာမှာ ထည့်သင်ပေးကြပါ... အခြေအနေတွေကို ရှက်လွန်းလို့ပါ..
မောင်မှန်7May 2013 18:02
က္ဈန်တော်လည်း မြန်မာကို မြန်မာလိုပဲ မြင်ချင်တယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာမလေးတွေကို "ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ"… တန်ဘိုးရှိတဲ့ မြန်မာမလေး တွေအဖြစ် မြင်ချင်တယ်။ ဗိုင်း ဆိုတာ ဝါဂွမ်းကို ဝါဖတ်စက်နဲ့ ဖတ်ထားတဲ့ အရာဝတ္တု။ အရမ်းဖြူစင်ပြီး အရမ်း ပေါ့လွန်းလို့ လေတိုက်ရင်တောင် အလွယ်တကူ လွှင့်ပါးသွားတတ်တယ်။ ဒီလို လွှင့်တတ်လို့ ကျောက် ဆိုတဲ့ အထိန်းအကွပ်နဲ့ ဖိပြီး ကာကွယ်ထားရတာ။ အဲဒီလိုပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိနြေ္ဒသိက္ခာကို ဟီရိ သြတပ္ပ ဆိုတဲ့ အရှက်အကြောက်တရား နှစ်ပါးနဲ့ ကာကွယ်ရတယ်။ လူမှာ အရှက်အကြောက် ဆိုတာ မရှိတော့ရင် ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အကုသိုလ် ဒုစရိုက်အမှုတွေ ပြုဘ်ို့ ဝန်မလေးတော့ဘူး။
ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ နိူင်ငံရေး... ဆိုတာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ယှက်နွယ်နေတယ်လို့ က္ဈန်တော် မြင်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှု လျော့နည်းလာရင် ဘာသာတရားလည်း တဖြည်းဖြည်း ကင်းကွာလာလိမ့်မယ်။ ဘာသာတရား နိမ့်ပါးလာတာနဲ့အမျှ လူမှုရေးတွေ ဒွေးရောယှက်တင် ဖြစ်လာပြီး စစ်မတိုက်ရတဲ့ နိူင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ မြန်မာ ဆိုတာ အုတ်ရောရော၊ ကျောက်ရောရော ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မြန်မာပြည် ဆိုတာ မြေပုံလောက်သာ ကျန်ခဲ့ပြီး မြန်မာစစ်စစ်ကို ပြတိုက်ထဲ သွားရှာရလိမ့်မယ်။
က္ဈန်တော် ဒီလိုပြောတာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ က္ဈန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိူင်ငံတွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေသလည်း ဆိုတာ သတိထားကြည့်လိုက်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုရှိနေပေမယ့် ယဉ်ကျေးမှုကနေ ဘာသာရေးအထိ ဝါးမြိုပစ်လိုက်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျောက်ကွယ်သွားရတဲ့ နိူင်ငံတွေ အများကြီးပါ။ က္ဈန်တော်တို့ မြန်မာနိူင်ငံကို ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုး မကြုံတွေ့ရစေဘို့အတွက် လူတိုင်းကိုယ်စီ မြန်မာ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အချိန်မီ ကာကွယ်တားဆီးမှ တော်ကာကျမှာပါ။
ကျန်စစ်သားမင်းကြီးဟာ သမီးတော် ရွှေအိမ်စည် အပေါ် လူကြမ်းကြီး လုပ်ပြီး ပဋိက္ခရားမင်းသား နဲ့ခွဲ၊ ခြေတစ်ဖက်မသန်တဲ့ စောယွန်းမင်းသား နဲ့ ဘာကြောင့် ပေးစားခဲ့ပါသလည်း...? ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး တစ်ခုမှမတူတဲ့အတွက် မြန်မာ ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကာကွယ်တားဆီးခဲ့တာပါ။ အဲဒါ မြန်မာစိတ်ပါ။ မြန်မာ ကို ဘာနဲ့မှ သွေးနှော မခံနိူင်တဲ့ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်က နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင် ကျော်ခဲ့တာတောင် အခုချိန်ထိ ခေတ်မီနေပါသေးတယ်။
Anonymous7May 2013 21:46
မောင်မှန်7May 2013 18:03
အခုတော့ က္ဈန်တော်တို့ မြန်မာမလေးတွေအများစုက ရိုးရာသနပ်ခါးကို မေ့ပြီး နိူင်ငံခြားကလာတဲ့ မိတ်ကပ် အမျိုးမျိုးကို ခုံမင် တပ်မက် နေကြပါပြီ။ ငါးပိကိုမေ့ပြီး ပေါင်မုန့်မီးကင် နဲ့ ချိစ် ကို တမ်းတနေကြပါပြီ။ အဆိုးဆုံးက အရှက်လုံယုံသာမက၊ အိနြေ္ဒသိက္ခာရှိပြီး မြန်မာ့ရာသီဥတုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ထဘီနဲ့အင်္ကျီကို ကိုယ်ပေါ်က ခ္ဈတ်ချပြီး နိူင်ငံခြားက ဈေးကြီးပေး ဝယ်ရတဲ့ မလုံ့တလုံ အဝတ်အစားတွေကို အမြတ်တနိုး ဝတ်ဆင်နေကြပါပြီ။ မြန်မာဆန်ဆန် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေး ဝတ်လာတဲ့ မြန်မာမလေးတွေကို အထင်မကြီးတတ်ကြပဲ "တိုက်ဂေါ"… ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ အထင်သေးချင်နေကြပါပြီ။
ဘီကီနီဝတ်ပြီးပြိုင်တဲ့ မယ်စကြာဝဠာပြိုင်ပွဲဝင် မယ်မြန်မာနန်းခင်ဇေယျာလဲ ပေါ်ပေါက်လာပြီ။ မယ်မြန်မာနန်းခင်ဇေယျာကို ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမျက်နှာစာအသစ်အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဖျက်ဆီးမဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေလဲ အပြာဆန်ဆန် မြန်မာမဂ္ဂဇင်းတွေ ထုတ်ဖို့၊ အပြာဆန်ဆန် မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ဖို့ အားခဲနေကြပါပြီ။ က္ဈန်တော်တို့ မြန်မာမလေးတချို့ကလည်း အပြာဆန်ဆန် မြန်မာမဂ္ဂဇင်းတွေအတွက် အပြာဆန်ဆန် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပေးဖို့တာစူနေကြပါပြီ။ အပြာဆန်ဆန် အနမ်းခန်းတွေ၊ အပြာဆန်ဆန် ခြင်ထောင်ခန်းတွေ၊ အပြာဆန်ဆန်စကားပြောတွေ ပါတဲ့ အပြာဆန်ဆန် မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ ရိုက်ပေးဖို့အသင့်ပြင်နေကြပါပြီ။ ပြည့်တန်ဆာတိုင်းပြည်လို့ ကမ္ဘာမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံက ပြည့်တန်ဆာရုံတွေမှာ ထိုင်းပြည့်တန်ဆာမတွေရဲ့ ဘီကီနီဝတ်ပြီး စင်ထက်ဖျော်ဖြေပွဲမျိုးတွေနဲ့အပြိုင် မြန်မာ့ပထမဆုံး အတွင်းခံ ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲကြီးလဲ ပေါ်ပေါက်လာပြီ။
ဒါတွေဟာ... တိုးတက်မှုလို့ ယူဆကြရင်တော့ ခေတ် ရေစီးကြောင်း ပြောင်းလဲမှုမှာ က္ဈန်တော်မောင်မှန် တစ်ယောက် အမှီမလိုက်နိူင်ပဲ ကျန်နေခဲ့ပြီလို့ ဆိုနိူင်ပါတယ်။ ဘိုးတော်ဘုရား လေးဖက်ကုန်းတဲ့အရွယ်က စကားတွေနဲ့ ဒီလူကြီး ဘာလာကြောင်တာလည်း... လို့ ဝိုင်းဝန်း ထောပနာ ပြုကြရင်လည်း က္ဈန်တော်ကတော့ ကျေနပ်စွာ ခံယူနေဦးမှာပါ။
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော... က္ဈန်တော်ကတော့ မြန်မာပုဆိုးနဲ့ အင်္ကျီကို သေသည်အထိ မြတ်နိူးစွာ ဝတ်ဆင်နေဦးမှာပါ။ ထမင်းစားရင်လည်း မြန်မာ့ငါးပိရည်နဲ့ တို့စရာမျိုးစုံကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလုပ်ပြီး အားပါးတရ စားနေဦးမှာပါ။ က္ဈန်တော့်အမေ ရေချိုးပြီးရင် လူးဘို့ မြန်မာသနပ်ခါးကိုလည်း အညာကျောက်ပျဉ်ပေါ်မှာ အားရပါးရသွေးပြီး ကိုယ်တိုင် လိမ်းပေးနေဦးမှာပါ။ အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး ဥပုသ်ယူကြတဲ့ မိဘနှစ်ပါးအတွက် ဆွမ်းချိုင့်ကို ကိုယ်တိုင် သွားပို့နေဦးမှာပါ။ ရှာဖွေထားတဲ့ ခ္ဈေးနှဲစာလေးထဲကနေ ကောင်းနိူးရာရာလေးတွေ ရွေးချယ် ချက်ပြုတ်ပြီး ဆွမ်းခံကြွချီလာတဲ့ သံဃာတော်တွေကို အာရုဏ်ဆွမ်း လောင်းလှူနေဦးမှာပါ။ မောင်နဲ့နှမ၊ သားနဲ့အမိ အတူတကွ ကြည့်ရှုလို့သင့်တော်တဲ့၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ အနုပညာ၊ စင်ထက်ဖျော်ဖြေပွဲမျိုးတွေကိုပဲ ကြည့်နေဦးမှာပါ။
ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ က္ဈန်တော်ဟာ... ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်တစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ.........။
Anonymous7May 2013 21:43
we dont need dimo homo
we need really myanmar